गर्भवती महिलालाई किन तलतल लाग्छ ? - नेपालबहस
गर्भवती महिलालाई किन तलतल लाग्छ ?
| १२:२८:३५ मा प्रकाशित
८ साउन, एजेन्सी । के तपाईलाई थाहा छ ? गर्भवती महिलालाई किन खाने कुराहरुमा तलतल लाग्छ ? हुन त हामी आफैँलाई पनि कुनै बेला यस्तै तलतल लागेको पनि हुनसक्छ। जस्तै केही महिलालाई आइसक्रीम र अचार मात्र खान मन लाग्छ, कोही मध्यरातमा पतिलाई कुखुराको भुटन ल्याइदिन भन्छन् भने कसैलाई एउटा विशेष ब्र्यान्डको चकलेट दिनमा पाँच पटक खानुपर्छ।
यस्तो तलतलले महिला र उनको गर्भमा विकसित भइरहेको भ्रूणको पोषणसम्बन्धी आवश्यकतालाई यस्तो तलतलले पूरा गरिरहेको हुन्छ भन्ने प्रायः सोचिन्छ। तर वास्तवमा यो एउटा जटिल प्रक्रियाको झुक्याउने भाग हो। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार गैरअङ्ग्रेजी भाषी संस्कृतिमा देखिने महिलाहरूको तलतल भने अमेरिका वा यूकेका महिलाको भन्दा निकै भिन्न देखिएको छ। उदाहरणका लागि जापानका महिलाहरूलाई भातको तलतल धेरै लाग्ने गरेको छ।
वास्तवमा तलतल लागेको भन्ने महिलाहरूले गर्भावस्थाका बेला स्वस्थ रहन आवश्यक भनिएकोभन्दा बढी तौल बढाउन चाहन्छन्। त्यसले जटिलता निम्त्याउन सक्छ। यसको अर्थ जुन महिलालाई तलतल लाग्छ उनीहरू तौल बढाउन चाहन्छन् भन्ने होइन। यो त जीवरासायनिक आवश्यकताबाहेक अन्य कुराले पनि भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ।
अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार चकलट प्रयोग गरिएको एउटा परीक्षणमा पोषणको आवश्यकतासँग तलतलको सम्बन्ध नभएको देखिएको छ । स्टेट यूनिभर्सिटी अफ न्यूयोर्क अल्बानीमा कार्यरत मनोविज्ञ प्राध्यापक जुलिया होर्मेसले किन मानिसहरूमा खानेकुराको तलतल लाग्छ भन्नेबारे विभिन्न अध्ययन गरेकी छन्। उनी भन्छिन्,उदाहरणका लागि अमेरिकाका ५० प्रतिशत महिलाहरूमा रजस्वला हुनुपूर्वको सातामा चकलेटको तलतल लाग्ने देखिएको छ । यस्तै तलतल जैविकभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक कारणले लाग्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
तेसो त गर्भवती भएको समयमा खानेकुरा मात्र ध्यान दिदा विस्तारै तौल बढ्दै जाने अध्ययनले देखाएको छ । यसले शिशु जन्मिने समयमा केही समस्या हुने देखाएको छ । तलतल मेटाउन ध्यान मोड्नु पनि अर्को उपाय हुन सक्ने बताइएको छ ।
गर्भवतीको घरमा झण्डा अनि हातमा अण्डा १ दिन पहिले
उमेर नपुगेका किशोरी गर्भवती हुने क्रम बढ्दै २ महिना पहिले
व्यथा लागेको चौध घण्टापछि हेलिकप्टरबाट गर्भवतीको उद्धार २ महिना पहिले
सिमकोटमा दुई पक्षबीच झडप हुँदा एक गर्भवती घाइते ३ महिना पहिले
निःशुल्क गर्भ जाँच गर्न ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम ३ महिना पहिले
गर्भवती आमासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन ५ महिना पहिले
साउदीमा तीन महिनामा कोमामा पुगेर बाँचेका भुजेलको उद्धार ४ मिनेट पहिले
श्रीमान हत्या गरेको अभियोगमा महिला पक्राउ १७ मिनेट पहिले
नवलपुरको बुलिङटारमा जीप दुर्घटना: एकको मृत्यु, १६ घाइते २६ मिनेट पहिले
आँबुखैरेनीका अग्निपीडितलाई गाउँपालिकाद्वारा राहत प्रदान ६ घण्टा पहिले
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आब्हान ११ घण्टा पहिले
दुई वर्षपछि शुरु भयो सिँचाइ आयोजनाको काम १० घण्टा पहिले
भारतीय कांग्रेसका नेता राहुललाई संक्रमण ३ दिन पहिले
धरहराको पुनःनिर्माण कार्य पूरा भएसँगै रङ्ग लगाउने काम जारी २ दिन पहिले
टीकापुरमा आगोले पोलिएका १७१ को निशुल्क शल्यक्रिया ४ दिन पहिले
साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई कर्जा दिने गरी मेगा बैंक र भोटेवहाल तयारी पोशाक उत्पादन तथा बिक्रेता संघबीच सम्झौता २ दिन पहिले
एकल इजलासकाे फैसला : सुवेदी न्यायाधीश बन्न योग्य २ हप्ता पहिले
टी–ट्वान्टी सिरिज : कुशल भुर्तेलले बनाए अर्धशतक ३ दिन पहिले
बिहीबार थप ५३४ जनामा कोरोना संक्रमण १ हप्ता पहिले
आज देशभरि आंशिक बदली : हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना २ वर्ष पहिले
आज इस्लाम धर्मावलम्बीले बकर–इद मनाउँदै ९ महिना पहिले
युवती बिरामी भएपछि झारफुक : भूत भगाउने भन्दै धर्मगुरुले बलात्कार गरे ! ५ महिना पहिले
राप्रपाको प्रस्ताव : राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रबारे सर्वदलीय बैठकमा पेश ४ महिना पहिले